Ichina lasekhaya mveliso kunye nabenzi | Amabini amahashe
Umzi mveliso wephepha: i-inki ye-kaolin ebunjiweyo inokufunxeka okuhle kunye nenqanaba lokufihla eliphezulu, elinokuthi ngokuyinxalenye lithathe indawo yexabiso titanium dioxide. Ifanelekile ngokukodwa kwizigulana ezinesantya esiphezulu. ICalcined kaolin njengesixhobo sokugcwalisa nayo inokuphucula ukubhala nokubhala iipropathi zephepha, kwaye inyuse iphepha. Ukulingana, ukutyibilika kunye nokuhombisa kwephepha kunokuphucula ukungabonakali, ukungena komoya, ubhetyebhetye, ukushicilela kunye nokubhala iipropathi zephepha, kunye nokunciphisa iindleko.
Ukwaleka kumzi mveliso: Ukusetyenziswa kwe-kaolin e-calcined kwishishini lokutyabeka kunokunciphisa inani le-titanium dioxide, yenza ifilimu yokutyabeka ibe neempawu ezintle, kwaye iphucule ukugcinwa, ukugcinwa kunye nokusetyenziswa kwepropathi yokutyabeka. Isixa se-kaolin ebalisiweyo esetyenzisiweyo kwizithambiso eziphakathi neziphezulu zi-10-30%, kwaye i-kaolin ebalisiweyo esetyenzisiweyo ikakhulu yi-70-90% kunye nomxholo ongu--2um
Umzi mveliso wePlastikhi: Kwiiplastikhi zobunjineli kunye nakwiiplastikhi ngokubanzi, inani lokugcwaliswa kwe-kaolin ebunjiweyo yi-20-40%, esetyenziswa njenge-filler kunye nokomeleza iarhente. ICalcined kaolin isetyenziswa kwiintambo zePVC ukuphucula iipropathi zombane zeplastiki.
Umzi mveliso werabha: Umzi mveliso werabha usebenzisa isixa esikhulu se-kaolin, kunye nomyinge wokugcwaliswa kumanqanaba erabha ukusuka kwi-15 ukuya kwi-20%. I-kaolin ebalisiweyo (kubandakanya ukuguqulwa komhlaba) inokuthi ithathe indawo yekhabhoni emnyama kunye nomnyama omnyama ukuvelisa iimveliso zerabha ekhanyayo, amavili, njl.
Ukupakisha: 25kg iphepha-zeplastiki ingxowa ezimbaxa kunye 500kg kunye 1000kg iingxowa ton.
Egqithileyo I-Iron oxide eluhlaza
Okulandelayo: Uhlambile uKaolin
ICalcined Kaolin yeeRefactories
Mhlophe iCalcined Kaolin